Maxaan U Aaminaa Wararka Beenta Ah? | Xaqiiqonews
Maxaan U Aaminaa Wararka Beenta Ah?
Intii aan an u ordeyno war helitaanka, waxa aan ku dhacnaa shabaqa beenaalyaasha sababo badan dartood, laakiin baaritaan dheer oo aan ka sameeyey internetka, aan wareystay dad badan oo baraha isticmaala, waxaa ii soo baxay sababahan.
Warar been ah ayaa lagu baahiyaa baraha bulshada, haba u badnaadeen wararka siyaasiga ah, kuwaasi oo dadka sameeya ay ka leeyihiin u jeedada ah “hal dhagax laba shimbir ku dil”, waa tan kowaade caan in ay ku noqdaan, iyo waa tan kalee in ay lacag ka helaan.
Sababtoo ah “Qofka ayaa Qaldan”.
Qofka war raadiyaha ah oo aan awoodin in uu warka qiimeeyo, qofka oo aan heysan tamar ku filan si uu u garto “warka beenta ah”.
Sababtoo ah “Bulshada iyo Baraha”.
Qaabka bulshada u sameysantahay waxa ay qeyb ka qaadan kartaa “been baahinta”, marka qorayaasha ay arkaan in wararka beenta ah ay ka faafitaan badan yihiin kuwa runta ah, waxa qeyb ka qaadaneysaa in ay badato been abuurka.
Barafasoor Timothy Caulfield, oo bara ka ah jaamacadda Alberta ee Kanada, waxa uu ku baaqayaa in xaqiiqooyinka lagu baahiyo luuqad sugaan iyo sheeko, si looga dhiga mid soo jiidasho leh.